उत्कृष्ट प्रदेश बन्ने प्रयास | eAdarsha.com
१. कुरो दुई वर्ष पहिलेको हो । भरखरै प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएको अवस्था थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेको बेला थियो । प्रदेश स्थापना भएकोमा उत्साह र उमङ्गको वातावरण थियो । संघीय संरचनालाई जसरी भएपनि सफल पार्नुपर्ने आवाज जताततै घन्किएको थियो । संविधानतः देश र जनताको भविष्य संघीय संरचनामा निहित रहेकोमा सबैको एक मत थियो ।
२. त्यो उत्साह र उमङ्गको वातावरणमा पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एउटा कुरा बारम्बर दोहो¥याउने गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो प्रदेशको प्राकृतिक, धार्मिक सम्पदाको प्रवर्धन गरेर आफ्नो प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउने अठोट गरेका थिए ।
३. उनीहरुले आफ्नो प्रदेशको धरोहरका रुपमा रहेका कुराहरुको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गर्दथे र तिनीहरुको संरक्षण र प्रवर्धन गरेर प्रदेशको समृद्धि गर्ने प्रण गरेका थिए । उनीहरुले त्यसवेला गरेका ती अठोट र प्रण कतिपयले भुलिसकेका पनि हुन सक्दछन् । तर सबैले भुलेका छैनन् ।
४. उनीहरुले त्यसवेला गरेका प्रणलाई आज संझौँ भने धेरै क्षेत्रमा निराशा हात पर्दछ । ती प्रदेशहरुमध्ये केहीले आफ्नो नाम र राजधानी समेत तोक्न सकेका छैनन् । सोचेमा यो विडम्बना हो तर विडम्बना भनेर के गर्ने यहाँ त्यस्तै भएको छ । अझ कतिसम्म यस्तो हुन्छ, यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
५. ती प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले जस्तै गरी बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । खर्चै गर्न नसकेपछि विकास र निर्माण कसरी हुन्छ, त्यो सबैले सोध्ने प्रश्न भएको छ । गत वर्षसम्म तिनीहरुले संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था नगरेकोले त्यस्तो स्थिति आएको भनेर माथितिर देखाउने गर्दथे । तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन ।
६. हजाँ केही काम भएको छ, त्यहाँ सबैको ध्यान जान्छ र त्यसको जस लिन सबै अघि सर्दछन् । तर काम नभएको ठाउँमा उनीहरुको दृष्टि नै जाँदैन । यो अचम्मको स्थिति छ । उदाहरणका लागि पोखराको बसपार्क लिन सकिन्छ । पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने नगर, जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरकार तथा सबै पार्टीहरुको प्रतिबद्धता हो तर आजसम्म कसैले त्यसमा रचनात्मक दृष्टि दिएका छैनन् ।
७. पोखराको फेवातालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सर्वाेच्चको फैसला आउनासाथ मापदण्ड कायम गरी मापदण्ड विपरीतका संरचना सफा गर्ने भनिएको थियो । त्यो पनि सेलाएर गएको छ । गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम त्यसै राख्ने अनि नम्बर १ प्रदेश हुन्छौँ भनेर प्रण गर्ने प्रचलन अनौठो छ । तिनीहरुको त्यस्तो अवस्थाले गर्दा उत्कृष्ट प्रदेश कुन भयो भन्ने अवस्था नै आएन । तिनीहरु मध्ये कसैले पनि आफुलाई उत्कृष्ट भन्न पनि सकेका छैनन् । हिजोको उत्साह उमङ्ग त्यसै सेलाएर गएको अनुभूति भएको छ । प्रदेशहरुले त्यसो गर्नुभएन । उत्कृष्टताका लागि प्रयास जारी राख्नु आजको आवश्यकता हो ।